सर्वसाधारणलाई हातमुख जोर्ने चिन्ता, वित्तिय संस्था ब्याज असुल्दै
शेरबहादुर ऐर आइतबार, भदौ १४, २०७७, ११:३३
धनगढी-कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका ११ का पण्डितराम कठरियालाई सहकारीको ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता छ। उनले लिएको ऋणको ब्याज असुल्न दैनिकजसो सहकारी संस्थाका कर्मचारी गाउँमा पुग्न लागेपछि उनलाइ यो चिन्ता बढेको हो।
साना किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था पहलमानपुर शाखाबाट उनले कृषिका लागि डेढ लाख रुपैयाँ ऋण निकालेका थिए। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दै आइरहेका उनी अहिले आम्दानीको स्रोत पनि नभएको बताउँछन्।
‘दुई महिना सरकारले लकडाउन ग¥यो, अहिले निषेधाज्ञा छ’ उनले भने, ‘मजदूरी पनि गर्न पाएको छैन । अन्न बेचुँ भने त्यो पनि अहिले उब्जनी भएको छैन।’ उनले घरमै खानेकुरा अभाव भइरहेका बेला सहकारीले ब्याज असुल गरिरहेको बताए। उनीबाट अहिले सहकारीले मासिक १० हजार रुपैयाँका दरले ब्याज तिनुपर्ने दबाब दिइरहेको छ। उनले भने, ‘गाउँमै सहकारीले ब्याज असुलका लागि भेला गरिरहेको छ। कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता छ ।’
सरकारले लकडाउन जारी गरेपछि घरधनीलाई भाडा मिनाह गर्न आग्रह गरेको थियो। सोही अनुसार घरधनीले पनि मिनाहा गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। एक घरधनीले भने, ‘घरभाडा त मिनाहा गर्ने भनेका थियौं तर, बैंकले हामीलाई कुनै राहत दिएन। जसका कारण मैले पनि घरभाडा मिनाहा गर्न सक्दिनँ। ’
धनगढीका एक व्यापारीले बैंकले ब्याजमा केही छुट दिए घरभाडा मिनाहा गर्न तयार रहेको बताए।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर ओझाले व्यापार व्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द भएको अवस्थामा बैंकहरुले ब्याज असुल गरिरहेको बताए।
ओझाले लकडाउनमा पनि बैंकले जानकारीनै नदिई खाताबाट पैसा तानेको बताए । उनले भने, ‘लकडाउनमा पनि बैंकले ब्याज असुल गरेकै थियो। लकडाउन खुकुलो भएसँग झन् बैंकलाई ब्याज असुल गर्न छुट भयो। अहिले निषेधाज्ञामा पनि बैंकहरुले ब्याज तिर्न ताकेता गरिरहेका छन्।’ उनले बैंकका कारण घरधनीले पनि घरभाडा मिनाहा नगरेको गुनासो गरे।
उनले लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण व्यापार व्यवसाय धरासायी भएकाले सरकारलाई सावाँ र व्याजमा छुट गर्नुका साथै व्यापार सञ्चालन गर्न अनुदान दिनुपर्ने बताए।
‘यो अवस्थामा व्यवसायीले कसरी बैंकलाई सावा व्याज तिर्न सक्छन्’, उनले प्रश्न गरे ।
सहकारी र निजी बैंकबाट ऋण लग्दै किसान
घोडाघोडी नगरपालिकामा अहिलेसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा छैन । त्यहाका किसान तथा व्यापारी पैसा आवश्यक परे निजी नीजि बैंक तथा सहकारीमा पुग्छन।
स्थानीय पण्डितराम कठरियाले भने, ‘यहाँका सहकारीले राष्ट्र बैंकसँग झण्डै आठ प्रतिशतमा ऋण लग्छ तर, हामीबाट १५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन्छ ।’ वाणिज्य बैंकको शाखा घोडाघोडीमा भएको भए किसान तथा व्यापारीहरुलाई राहत हुने उनको भनाइ छ।
कैलालीमा वाणिज्य बैंक अहिले सात वटा स्थानीय तहमा पुगेको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी, गौरिगंगा, भजनी, लम्की, टीकापुर नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिकामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखा छन्।
पहिरो पीडितको एक महिना : राहतका नाममा एउटा त्रिपालमात्र
केयूको उपकुलपतिका लागि मकाजू, थापा र लुइँटेलको नाम सिफारिस डा. रामकण्ठ मकाजू, प्राडा. भोला थापा र प्राडा. बालचन्द्र लुइँटेलको नाम केयूको उपकुलपतिका लागि सिफारिस भएको हो। यी तीनमध्येबाट एक जना... सोमबार, माघ ५, २०७७
काठमाडौं रविभवनको अपार्टमेन्टमा आगलागी, नियन्त्रणमा लिने प्रयास जारी आगलागीको कारण खुल्न सकेको छैन। यस्तै क्षतिको विवरण पनि प्राप्त नभएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रमेश विष्टले जानकार... सोमबार, माघ ५, २०७७